सरकारको श्राद्ध गरेर भ्रष्टाचार अभियन्ता भुसालले अनशन तोडिन् (भिडियो सहित)
19 Magh 2070 Sunday 11:52 am प्रतिकृया दिनुहोस
स्थानिय निकायमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै भ्रष्टाचारमा संलग्नलाइ कारबाहीको माग राखी १३ दिनसम्म खुल्लामन्चमा अनशनमा बसेकी शारदा भुषाल झाले अन्तत शनिबार आफैले अनसन तोडेकी छिन् । सरकारले अनसनप्रति कुनै चासो नदेखएपछि भुषलले सरकारविहिन देश भएको भन्दै सरकारको श्राद्ध गरेर अनशन तोडेकी हुन्। केही दिन अघि डा गोबिन्द केसीको अनसनप्रति बडो मानबियता देखाएका मानबअधिकारकर्मी देखि संचारमाध्यम र राजनितिक दलहरुको रबैया भुषालको अनसनमा भने सुन्य देखियो ।अनसन बसेको १३ दिन सम्म न सरकारी अधिकारी उनको अबस्था बुझ्न खुल्लामन्च पुगे नत कुनै अधिकारकर्मीले उनको मागमा समर्थनको कुनै सम्बोधन नै गरे ?
भुषालको अनसनप्रतिको उदासिनताले केही प्रश्नहरु उब्जाएका छन् !
भुषलले उठाएका मागहर गलत हुन् त ?
के नेपालमा सुशासन साँच्चै छत ?
भुषालको माग गलत थियो भने सरकारले भुषालले राखेको माग सबै वाहियात हुन् भनेर किन भन्न सकेन ?
किन बोल्न सकेनन् अधिकार कर्मी नेपालमा सुशासन छ भनेर ?
भुषलले १३ दिन सम्मको भ्रष्टाचार बिरुद्धको अनसन त तोडिन तर अनसन तोडेर बोल्दै गर्दा उनी बेहोस भइन । उनले बोल्ने क्रममा ‘सरकारी अधिकारी र कर्मचारीले जनता मालिक र आफु उनिहरुको सेबक भएको बिर्सेको भन्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त बनेको सरकार र कर्मचारी तन्त्रकै कारण देशको यो अबस्था भएको बताएकी थिइन्’ ।
करिव ३ मिनेट सम्बोधनका क्रममा बेहोस भएकी उनलाई शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।
कहिले सम्म स्थानिय निकायमा भैरहेको भ्रष्टाचार प्रति आँखा चिम्लिरहने ?सानातिना काम गराउन पनि घुस खुवाउन पर्ने प्रबृति कहिलेसम्म कायम रहने ? आम नागरिकका यी प्रश्नको जवाव दिने कोही नभएपनि शारदा भुषलको अनसन तोडिएसंगै सरकारलाइ राहत भएको छ ।
तर भुषालले अनसन तोडिरहदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारअगाडि न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिको १३ दिने क्रियाकर्म गरी अनशन सकिएको घोषणा भने गरेकी छिन् । भुसालले सरकार मरेको भन्दै १३ औं दिनको क्रिया गरेकी हुन् ।
देशमा न्याय छैन भन्दै न्यायको काजक्रिया गर्दा यसले दिने सन्देश निकै महत्वपुर्ण र पेचिलो छ ।